🥇 ▷ (Huawei Mate 30 Pro) Rikoodh-Dardar Muuqaal Video-ga ah oo ah 7680fps!? ✅
(Huawei Mate 30 Pro) Rikoodh-Dardar Muuqaal Video-ga ah oo ah 7680fps!?
Soo saarista calanka cusub ee ‘Huawei’s flagship’ (Mate 30) ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco 19ka Sebtember magaalada Munich. Dhacdo aan halkaas ku soo bandhigi doonno si aan uga warrano bilowga waxa aan shaki ku jirin mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu xiisaha badan sannadka, laakiin sidoo kale inaan fahanno sida Huawei ay uga gudbi doonto xayiraadda ay soo rogtay Mareykanka.
Taasi waxay dhahday, maaddaama ay caado ahaan tahay … Meelaha daadanaya waxay ku socdaan xawaare buuxa! Dhacdo ahaan, websaydh Shiineeys ah ayaa hadda daabacay muuqaal ah saldhigga xayeysiinta ee ‘Huawei Mate 30’, halkaas oo aan horey ugu arki karno qaar ka mid ah faahfaahinta kama dambaysta ah ee aaladda.
In kasta oo aan wax badan ka ognahay Huawei Mate 30 Pro… Ayaa qiyaasaya in taleefanka casriga ah uu awood u yeelan doono inuu qabsado fiidiyowga ‘Slow-Motion’ ee taleefanka 7680fps?
Sidaa daraadeed, marka loo eego sawirka la wadaago, awoodaha gaabiska ah ee Mate 30 Pro wuxuu gelinayaa wax walba Samsung, Sony, iwm… waxay ku leeyihiin suuqa, jeebkaaga! Laakiin illaa iyo hadda, xitaa ma jiro xafiiltan ka dhex taagan arimahan.
Ka dib oo dhan, halka Galaxy Note 10+ ay duubi karaan fiidiyowyada dhaqdhaqaaqa gaabiska ah 960fps. Mate 30 Pro waa inuu awood u yeeshaa inuu isku mid sameeyo 7680fps! Haa, si fiican ayaad u akhriday… Toddoba kun iyo lix boqol iyo siddeetan xirmooyin halkii seg.
Teknolojiyadee noocee ah ayaa Huawei u adeegsan doontaa in lagu dhammaystiro muuqaalkan? Wax fikrad ah kama lihin. Laakiin dhab ahaantii, soo-saaraha ayaa durba dhalleeceeyay awooda muraayadaha super lens ee akoonkiisa rasmiga ah ee Twitter-ka. Marka way fududahay in la sheego in shirkadda Shiinaha ay ku kalsoon tahay awoodaha filimada ee telifoonkeeda cusub.
Heerka nidaamka kamaradaha, waxaan sidoo kale baranay in Mate 30 Pro uu lahaan doono laba 40MP dareemayaal, mid saddexaad oo ah 8MP ah iyo waliba aaladda 3D (ToF). Intaas waxaa sii dheer, waxaan heli doonnaa ‘Habeeyn Habeeyn Sare oo Habboon’ Hab Habayn ‘ah.
Batteriga wuxuu sidoo kale si aad ah ugu fiicnaan doonaa ilaa 4500mAh!
Markaa, si loo sii wado isbedelka madax-bannaanida, Huawei waxay qalabkeeda cusub ku qalabayn doontaa batteriga 4500mAh. Taageerida 40W si dhakhso ah u ku dallacaya fiilada, iyo 27W wireless.
Xanta kale ayaa sidoo kale xusaya isticmaalka shaashad leh taageero 90Hz oo taageero ah, iyo sidoo kale naqshadda ‘Waterfall’, taas oo iyana horseedi doonta in laga tirtiro garaacista mugga caadiga ah.